गठबन्धनमा घात नभए पासाङ उपराष्ट्रपति पक्का, तर गोप्य मतदानमा चिप्लाइ त दिन्नन्? – MySansar
गठबन्धनमा घात नभए पासाङ उपराष्ट्रपति पक्का, तर गोप्य मतदानमा चिप्लाइ त दिन्नन्?
Posted on October 30, 2015 October 31, 2015 by Salokya
विवाद भए पनि अन्ततः सत्तारुढ गठबन्धनकै तर्फबाट एमाओवादीका नन्दबहादुर (किशोर) पुन ‘पासाङ’लाई सत्तारुढ गठबन्धनले उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउँदै उम्मेदवारी दर्ता गर्‍यो। उनका प्रस्तावक एमाले नेता झलनाथ खनाल रहे भने समर्थक राप्रपा नेपालका दिलनाथ गिरी रहे। चार जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको र गठबन्धनभित्र साना दलहरुले नमानेकाले सुरुमा उनलाई अलि गाह्रो जस्तो देखिए पनि पछि भने उनको विजय लगभग पक्का देखिएको छ। आफ्ना उम्मेदवार नजिते सरकार छाड्ने चेतावनी दिनुपरेको थियो प्रचण्डले।
एमाओवादी उम्मेदवारका लागि भोट मागिदिन प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयं प्रचण्डसहित नेमकिपा अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे कहाँ साँझ पुगे। बिजुक्छेले पासाङलाई नै सघाउने वचन दिएको स्वयं ओलीले सञ्चारकर्मीहरुलाई बताए।
नेकपा मालेका सीपी मैनालीले मधेसीलाई उपराष्ट्रपति बनाउनु पर्ने धारणा राखेका थिए। तर पार्टी पोलिटब्युरोको बैठकले एमाओवादी उम्मेदवारलाई नै मत दिने फरक मतसहितको निर्णय गरिसकेको छ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी थारुलाई उपराष्ट्रपति बनाउनु पर्ने अडानमा थिए। तर उनको पार्टीले पनि एमाओवादी उम्मेदवारलाई मत दिने तर फरक मत भने राख्ने बताएको छ।
उम्मेदवारी दर्ता गराउने चार मध्ये दुई जनाले नाम फिर्ता लिएपछि पासाङलाई जित्न सहज पनि भएको छ। उम्मेदवारी दिएका स्वतन्त्र सांसद अतहर कमाल मुसलमानले कांग्रेसलाई र परिवार दलका केन्द्रीय सदस्य दयाराम कँडेलले पासाङलाई समर्थन गर्ने भन्दै नाम फिर्ता लिएका हुन्। प्रतिपक्षी कांग्रेसले अमियकुमार यादवलाई उपराष्ट्रपति उम्मेदवार बनाएको छ।
उपराष्ट्रपति चुन्न शनिबार बिहान १० बजेदेखि १ बजेसम्म मतदान हुँदैछ। मतपरिणाम भने ५ बजेको बैठकमा घोषणा हुनेछ।